संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीको दमदार सम्बोधन (पूर्णपाठ) « Janata Times
संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीको दमदार सम्बोधन (पूर्णपाठ)
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बैठकमा बर्तमान सरकार समृद्धिको लक्ष्यसहित अघि बढेको र सोहीअनुसारको नीति तथा कार्यक्रम आएको बताउँदै मेरो सरकार भन्न नडराउन सुझाउनु भएको छ । संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भन्दा कसैले अल्मलिनु र आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले मेरो सरकारदेखि सांसदले उठाएका एक एक प्रश्नको तथ्यसहित जवाफ दिनुभयो ।
थुप्रै प्रश्नहरु उठेका छन्, ६ ओटा संशोधन प्रस्ताव आएका छन्, १२३ जना माननीयज्यूहरुले प्रतिनिधि सभामा विचार व्यक्त गर्नुभएको छ, छलफलमा सहभागिता जनाउनु भएको छ । पहिलो दिन ५४ जनाले दोस्रो दिन ६३ जनाले र आज तेस्रंो दिन ६ जनाले धारणा व्यक्त गर्नु भएको छ । थुप्रै विषयहरु यस क्रममा उठेका छन् । प्रकृति–प्रकृतिका विषय अनेक कुराहरु उठेका छन्, जुनसँग सम्बन्धित छ, त्यसमा सम्बन्धित विषयमा विषयगत ढंगले आफ्ना धारणाहरु राख्ने र प्रष्ट पार्ने कोसिस गर्नेछु ।
त्यसकारण दिउँसै सपना देख्यो भनेर । यो राती देख्ने सपना भनेजस्तो तरङ्गको कुरा गरेको होइन यहाँ । यहाँ देश बनाउने अठोटको कुरा गरेको हो–सपना भनेको । यसले सपना बोकेको छ देश बनाउने, १ वर्षका लागि के गर्न सकिन्छ ? त्यस पछिका वर्षहरुमा के गर्छौ र कहाँ पुग्छौँ ? कति समय भित्र कहाँ पुग्छौँ रु दिगो विकासको एउटा सपना हो । दिगो विकासको लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र संघले देखेको सपना हो, राष्ट्रहरुले देखेको सपना हो, हामी सबैले देखेको सपना हो । अनि यो सपना राति निदाएर देखेको सपना होइन ।
अहिले पनि नेपाली समाजमा एउटा सामन्ती सस्कार, सामन्ती मानसिकता यस्तो देखिन्छ जन्मसिद्ध ढंगले श्रेष्ठ हुँ भनेर दावी ग¥र्यो भने, जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको कुरा गर्यो भने त्यो गाह्य मान्य हुने, त्यसको गरिमा हुने जस्तो ठानिन्छ । जनताद्धारा निर्वाचित व्यक्तिहरु, सस्थाहरु, निकायहरु, जननिर्वाचित सस्थाहरुको मान्यता कम हुने अथवा तिनको गरिमा नहुने यस प्रकारको एउटा मानसिकता देखिन्छ । हामीले त्यस्तो मानसिकता लिनु हुँदैन । जनताद्धारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुमा जुन गरिमा छ, स्वघोषितहरुमा त्यो हुँदैन । त्यसकारण हामीले जनप्रतिनिधिहरुको व्यवस्था ल्याएका हौँ । जनप्रतिनिधि सम्मानित हुन्छन् । अनि जन्मसिद्ध श्रेष्ठताका, पाखण्डी सिद्धान्तका आधारमा सम्मानित हुने, गरिमामय हुने, जननिर्वाचित गरिमामय नहुने हुँदै हुँदैन् । त्यो मानसिकता छोड्नपर्छ लोकतन्त्रको सम्बन्धमा, यो जननिर्वाचित प्रणाली हामीले लडेर ल्याएका हौँ । जनतामा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न रहने यो प्रणाली हामीले ल्याएका हौँ ।
यस नीति कार्यक्रमका सम्बन्धमा अलिअलि अन्योल रहेको मैले पाए साथीहरुमा, त्यस्तो अन्यौल लिनुपर्ने अवस्था छैन । साथीहरुले गरेका संशोधन प्रस्तावहरु मैले हेरेँ । मलाई केही अलिकति ध्यान दिनु पर्ने खालका सुझावहरु, संशोधनहरु केही छन् कि रु भन्ने अलिकति लागेको थियो । त्यो मैले हेरे । त्यसमा त्यस्तो केही छैन । मलाई खुसी के लाग्यो भने आलोचनाको कुनै ठाउँ रहेनछ । एक जना मित्रले भन्नु भो यो सुन्दर निवन्ध जस्तो छ भनेर । यस सम्बन्धमा म धेरै टिप्पणी गर्दिन के मात्रै भन्छु भने नीति कार्यक्रममा आलोचना योग्य ठाउँ भेटिएन छ ।
हामीले आर्थिक क्षेत्रमा देशलाई कसरी अगाडि बढाउने रु कृषि क्षेत्रमा कृषिको आधुनिकिकरण गर्ने, व्यवसायिकिकरण गर्ने, मसिनिकरण गर्ने, कसरी त्यसलाई गर्न सकिन्छ रु अहिलेसम्म कृषि क्षेत्रमा जुन दुई तिहाई जनसंख्या अल्झिएको छ, त्यसबाट त्यहाँ रोजगारी, रोजगारीका अवसरहरु भएर होइन । अर्को विकल्प नभएर अल्झिएको छ । त्यसलाई त्यहाँबाट निकाल्न जरुरी छ । त्यो व्यवसायिकिकरण र यान्त्रिकिकरणबाट निकाल्न सकिन्छ । आधुनिकिकरणबाट त्यहाँको जनसंख्यालाई बाहिर निकाल्न सकिन्छ ।
यसका विभिन्न विधिहरु अपनाइएका छन् । त्यो मैले यहाँ नीति कार्यक्रम हामीले सुनी सकेको, पढिसकेको हुँदा त्यसलाई फेरि दोहोर्याईरहनु, फेहरिस्त दिनुपर्ने त म केही ठान्दिन । कृषिलाई व्यवस्थित ढंगले, योजनाबद्ध ढंगले कुन ठाउँमा ? कुन प्रकारको कृषि रु कुन स्तरमा, ठूलो मात्रामा कसरी कृषिको उपज बढाउने रु कृषि एक ठाउँमा एक प्रकारको बाली लगाउने,
कहीँ हामी चिया लगाउछौँ भने त्यो चिया निर्यात योग्य ढंगले उत्पादन हुन सकोस् । कफि लगाउछौँ भने त्यो हुन सकोस् । धान भए आत्मनिर्भर हुने गरी र त्यो भन्दा निर्यात हुने गरी हुन सकोस् । गहुँ त्यसैगरी, मकै त्यसैगरी हुन सकोस् । त्यसका लक्षणहरु देखिएका छन् । हुन त पानी परेर त्यस्तो राम्रो भएको भन्या छन् साथीहरुले । तर पानी त सधै पथ्र्यो । यसवर्ष धान पनि ९ प्रतिशत बढ्ने, समग्र कृषि पनि ६ प्रतिशतले भन्दा बढीले बढ्ने कुरा पानीले मात्र होइन । यस वर्ष मात्रै पानी परेको होइन होला । धान त पानी परेर बढ्यो ? अरु चाहि कसरी बढ्यो ? सब्जी चाहि कसरी बढ्यो ? फलफुल चाहि कसरी बढ्यो ? पानी नै परेर बढेको हो सबै ? त्यसो भए त खेती नै गर्न परेन नि पानी परिहाल्छ, खेती बढिहाल्छ । त्यस्तो होइन, योजनावद्ध ढंगका प्रयासहरु अगाडि बढाइएका छन् ।
म तुलनात्मक रुपमा भन्न चाहन्छु यसवर्ष जुन ढंगले नीति कार्यक्रम आएको छ अझ बरु अलिकति लामो भयो भन्न सकिएला, अलिकति सविस्तार भयो भन्न सकिएला तर सबै कुरा आएको छ पनि भन्नु हुन्छ, केही पनि छैन भन्नुहुन्छ फेरि, सबै कुरा आएको छ केही पनि छैन भनेको के रु सबै कुरा आएको छ यसमा र वास्तवमा एउटा देश विकासका लागि समग्र क्षेत्रहरुमा यसको कुराहरु आएको छ ।
गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा म दृष्टान्त दिन्छु, कोविन्दजीको भर्खरै कुरा त अरु पनि साथीहरुले भन्नु भो प्रवणमुखर्जीजी जिन्दगी भर कांग्रेस रहनु भयो । कंग्रेसबाटै मन्त्री, कंग्रेसबाटै उहाँ प्रस्तावित भएर राष्ट्रपति हुनुभयो । बिजेपीको सरकार बन्यो । बिजेपीको सरकार बनेपछि पनि उहाँले कसरी सम्बोधन गर्नुभयो भन्दा खेरी माई गवरमेन्ट भनेरै सम्बोधन गर्नुभयो । यो चलन हो दुँनियाको र राष्ट्रपति, हुन त यहाँ संविधानका धारा धारा पढ्नु भो साथीहरुले राम्रो हो । हामीले संविधान पढ्ने, संविधानको भाव लिने, संविधान कार्यान्वयन गर्नु छ । त्यस कारण संविधान अनुसार चल्ने, त्यसलाई उद्दरण गर्ने वानी गर्नुपर्छ । एकदम ठिक छ । तर गर्दा खेरी अर्कै अर्थ लाग्ने गरी त्यसरी व्याख्या गर्नुहुँदैन । भारतको राष्ट्रपतिलाई पनि कार्यकारी अधिकार सहितको त्यस्तो उस्तो भन्ने हुँदैन ।
राष्ट्रपतिले त्यस्तो गरेर बोल्ने होइन कसको सरकार हो, के हो, कसो हो भनेजस्तो गरेर बोल्ने होइन । ढुक्कले भन्ने हो मेरो देश, मेरो संसार, मेरो धर्ती, मेरो सरकार । अनि यो कुनै नयाँ कुरै होइन । हाम्रो संसार, मेरो धर्ती । कमन मान्छेले भन्छ १ अनि राष्ट्र प्रमुखले आफ्नो देशको सरकारलाई सर्वोच्च संस्थाले आफुभन्दा मातहतको सरकारलाई मेरो सरकार भन्नु एकदम ठिक छ । यसमा अल्मलिनु हुँदैन ।
साथीहरुलाई के लागेको देखियो भने निरङ्कुशतन्त्रमा चाहि मेरो सरकार भन्नु ठिकै हो । निरङ्कुशतन्त्र बाहेक लोकतन्त्रमा मेरो सरकार भन्न पाइदैन भनेजस्तो त्यस्तो होइन । हामी सबैको सरकार हो । त्यसकारण प्रतिपक्षलाई आफ्नो सरकार भन्न अलि गाह्रै हुन्छ होला, नेपाल सरकार भन्न त अलि सजिलै छ । त्यो गाह्रो हुँदैन । प्रतिपक्षले पनि यो सरकारलाई त आफ्नै सरकार भने हुन्छ । अब बजेट हेर्नुहोला प्रतिपक्षका लागि बजेटमा कति काम हुन्छ । अनि आफ्नो सरकार भन्न के फरक पर्यो र ?
यो संविधान हामीले स्थापना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यसलाई रक्षा गर्ने, सुदृढ गर्ने, फंग्सनेवल बनाउने, गतिशील बनाउने त्यस कामका लागि । जनताको एकतालाई सदृढ गर्ने । साम्प्रदायिक विद्वेष आदि खतम गर्नका लागि हो यो । त्यसकारण ती उद्देश्यका लागि यो जहिले पनि संशोधन हुन सक्छ–मैले भनिराखेको छु । तर यो संविधान संशोधन भनेको जुनसुकै मौसममा पनि गाउँने गीत जस्तो भयो । अहिले पनि संविधान संशोधन, भरै पनि संविधान संशोधन । कुन विषयमा त्यो त छलफल गर्न सकिन्छ नि । बसेर छलफल गरौं न कुनकुन विषयमा गर्ने संविधान संशोधन । के के विषयमा गर्ने रु के के मा आवश्यकता पर्यो ? आवश्यकता परेको ठाउँमा । यो पब्लिक कन्जम्सनका लागि सधै एउटा भन्ने कुरा जस्तो भयो । यस्तो नगरौं ।
मेरो आग्रह के छ भने देशका हितको पक्षमा, जनताको हितका पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा कही केही अथवा लोकतन्त्रलाई राम्ररी संचालन गर्ने सन्र्दभमा कतै केही गर्नुछ भने त्यसलाई संशोधन गरौं । कहाँ गर्ने हो रु त्यो संशोधन गर्न नसकिने विषय होइन । संशोधन गर्न सकिन्छ । तर यो कुनै लहडको विषय, यसलाई अनावश्यक ढंगले त्यो उछालिरहने त्यस्तो विषय पनि होइन । म साथीहरुलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, ठिक छ नि विभिन्न दलहरुका भनाइहरु के हुन तिनीहरुलाई मूर्त रुपमा संशोधनका सन्र्दभमा कुरा गर्न सकिन्छ । तर त्यसको पनि समय हुन्छ । त्यसका उद्देश्यहरु हुन्छन् । राम्रा उद्देश्यका साथ छलफल गर्न, संशोधन गर्न नसकिने कुरा होइन ।
०४८ को निर्वाचन पछि हामीले भन्यौं यसलाई अब बिस्तार गर्नुपर्छ लोकतन्त्रलाई । पोलिटिकल फ्रिडमलाई सोसल, इकोनोमी कल्चरल फ्रिडमसम्म र तिनको समृद्धिसम्म, विकाससम्म विस्तार गर्नुपर्छ भनियो । त्यो विस्तार हुन नसक्दा विभिन्न समस्याहरु आए । अब त्यसलाई विस्तार गरेर समस्याहरु आउन नदिने, जनताका असन्तुष्टि हुन नदिने, असमानता र विभेद हुन नदिने । मैले सधै भन्ने गरेको छु, समानता भनेको केही केहीले नबुझेर यो कम्युनिष्ट सिद्धान्त भनेको गरिबीको वितरण हो भनेर भन्ने पनि गरे पहिले पहिले । अहिले चीनको विकास, भियतनामको विकास यस्ता देशहरुको विकासले कम्युनिष्ट सिद्धान्त भनेको गरिबीको वितरण हो, विकासचाँिह गर्न सक्दैन । समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन भन्ने कुराहरु ति कमजोर परे अहिले ।
एउटा प्रश्न उठाइएको छ, यो एक वर्षको कार्यक्रम हुनुपर्नेमा यसलाई धेरै वर्षको निरन्तर जस्तो बताइयो, चार वर्षको भनियो, तीन वर्षको भनियो, पाँच वर्षको भनियो भनेर । हामी केही दीर्घकालिन योजनाहरु बनाउँछौं, पाँच वर्षका पञ्चवर्षिय योजना बनाउँछौं । अहिले हामो एलडिसीको तहबाट मुक्त गर्ने टार्गेटसँग, एलडिसीका लक्ष्यहरु, एलडिसीबाट उन्मुक्त हुने ,त्यसबाट मुक्ति पाउने र एउटा मध्यमस्तरको आय हुने र विकासील देश, त्यसपछि मध्यमस्तरको आएको अवस्थामा जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दैछौं । ती कुराहरुसँग, यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलसँग, एसडिजीसँग जोडेर र त्यसभन्दा पछि विक्रम सम्वत २१ सय सम्मको । हाम्रो यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा के गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरुलाई हेरेर योजनावद्ध खाका तय गरिएको छ ।
मैले पहिले पनि भन्ने गरेको छु ढुंगो समातेर फ्याक्यो जहाँ खस्छ त्यहाँ मैले लक्ष्य राखेको थिएँ, त्यही मेरो टार्गेट हो भन्ने होइन । टार्गेट निश्चित गरेर अनि हामी हान्छौं । अर्थात हामी विक्रम सम्वत २१ सयसम्मा कहाँ पुग्छौं, अथवा इस्वी सं ४३ सम्मा कहाँ पुग्छौं, इस्वी सं २०३० सम्मा कहाँ पुग्छौं, इस्वी सम्वत २०२२ सम्ममा कहाँ पुग्छांै भन्ने कुरालाई हेक्का राखेर त्यसका निम्ति अहिले कस्ता नीतिहरुका साथ जाने भनेर अहिले थालेका काम अहिलेकै वर्ष नटुङ्गिन सक्छ । त्यसकारण बहुवर्षिय योजनाहरु राख्ने गरिन्छ । दीर्घकालिन योजनाहरु राख्न सकिन्छ । राख्ने गरिन्छ । ति कुराहरु त यो एउटा निरन्तर पक्रिया हो र त्यसमा ठ्याक्कै एक वर्षका लागि भन्ने मात्रै हुदैन निर्माणका कामहरु, विकासका कामहरु । त्यो अहिले यो विषय पनि धेरै छलफलको विषय हुनुपर्ने जस्तो त मलाई लाग्दैन । यो विषय एकदमै सहज विषय हो ।
बढ्दो व्यापार घाटाको सम्बन्धमा साथीहरुले कुरा उठाउनु भएको छ । यसप्रति सरकार अत्यन्त सजग छ । सजग भएको कुरा नीति कार्यक्रमले बताएको छ । हामी कसरी उत्पादन वृद्धि गछौं, कुनकुन क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गछौं, कुन कुन आयातलाई निरुत्साहित गछौं । यो कुराहरु बताइएको छ । अनावश्यक खालका, स्वास्थ्यलाई हानी पु¥याउने खालका, आयात नगर्दा हुने खालकालाई आयात नगर्ने । लगानी गर्दा उत्पान वृद्धि, रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना, आत्मनिर्भरताको अभिवृद्धि, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात अभिवृद्धि गर्ने यस प्रकारका क्षेत्रहरुमा कामहरुमा, उद्योगहरुमा, व्यवसायहरुमा बढी लगानी गर्ने । त्यतापट्टि प्रोत्साहित गर्ने ति कुराहरु भनिएको छ ।
यस पल्ट व्यापार घाटा किन भयो भने निर्माण सामाग्रीहरु खरीद गर्दाखेरी अलिकति व्यापार घाटा बढेको देखिन्छ । तर त्यो त्यस्तो डर लाग्दो खालको स्थिति अथवा त्यो कुनै भयावह स्थिति छैन् । त्यसकारण कृषिको आधुनिकीकरण, उद्योगहरुको संचालन, स्थापना आदि कुराहरु मार्फत यसलाई हटाउने, यो व्यापार घाटाको स्थितिलाई अनुकुलता तर्फ लाने नीति लिइएको छ । एकैचोटी व्यापार घाटा यति भयानक छ । र, यसै वर्ष व्यापार घाटा यस वर्ष सुरु भएको, यस वर्ष मात्रै भएको होइन यो । व्यापार घाटाको भयावह स्थिति छ । जसलाई अन्त्य गर्ने दिशामा अहिलेको नीति कार्यक्रम अगाडि बढेको छ । म त्यो माननीयज्यूहरुलाई आस्वस्त पार्न चाहन्छु ।
आधार वर्ष एउटा चिजमा भएन । कानुन निर्माणमा मात्रै भएन । संरचना निर्माणमा मात्रै भएन । अरु कुृराहरुमा पनि शान्ति, सुव्यवस्था लगायतका प्रश्नहरु, राजनीतिक समस्याका समाधानका प्रश्नहरुदेखि लिएर अनेक कुरामा पनि आधार वर्षका रुपमा यो वर्षले काम गर्यो । अनेक प्रश्नहरुको रुपमा आधार वर्ष । पृथकतावाद अन्त्य भएको छ, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि बहुत लुलाफितला होइन दृढ कदम चालिएको छ । र यो परिणममुखी छ शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन्छ । कायम भएको छ । हिजोको जुन एउटा स्थिति थियो त्यसमा परिवर्तन भएको छ । त्यसकारण यसले आधार वर्ष ।
संघीय सरकारका मातहतमै, संघीय कानुनका मातहतमै प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरु हुन्छन् । यो पनि कुनै अनौंठो कुरा हो र भनेको रु स्वतन्त्र सरकार त होइनन् नि रु ति केन्द्रीय, संघीय सरकारकै मातहतमा हुन । यस्तो कुरामा अलमल राख्नु हुदैन । यी कुराहरुका लागि प्रदेश समन्वय परिषद्, प्रदेश परिषद् र अरु यस्ता समन्वयकारी कामहरु भइराखेका छन् । त्यो माननियज्यूहरुलाई थाहै छ ।
सार्वजनिक सम्पति, जमिनहरु, बालुवाटार पनि बिकेछ, खोई बसपार्क ? यो सरकार बनेपछि त्यो खुला मञ्च चाहि मासेको हो र रु खुला मञ्च त अगाडि मासिएको थियो । अहिले त्यस खुलामञ्चलाई फिर्ता ल्याउने काम हुदैछ । अब बालुवाटार, अहिले बालुवाटरको जमिनको समस्या पैदा भएको हो ? अहिले त छानबीन हुदै छ त्यहाँ । खोजी हुदैछ अहिले त । अनि वाइडबडीको कारोवार अहिलेको सरकार आएर गरेको हो ? छानबीन हुँदैछ अहिले । गुठीका जमिनहरु, अरु जमिनहरु, विभिन्न जमिनहरुको, सार्वजनिक सम्पतिहरुको हिनामिना अहिले भएको हो र ? पहिले भएकाको छानबीन हुदैछ अहिले ।
फेरि कर्मचारीतन्त्रमा यस्तो उस्तो म यसो सम्झिन्छु, हामी अभ्यास गर्दैछौं । मलाई सम्झना छ, ०४८ को निर्वाचन पछि यस्तो आंतक लोकतन्त्र भनेको के हो भन्ने अनौंठो परिभाषा । स्थायी कर्मचारीहरु फटाफट यसरी निकालिए, यसरी लखेटिए कोही अदालत गए, शिक्षक यसरी लखेटिए मैले भन्नु पर्दैन । तर त्यो एउटा गलत अभ्यास थियो । हामीले त्यसलाई विरोध गर्यौं । त्यो अभ्यासलाई पछि गएर रोक्यौं । त्यस अभ्यासलाई पछि गएर सच्चाउन कदम चाल्यौं । अब त्यस्तो अभ्यास हुदैन । किनभने त्यस्तो अभ्यास लोकतान्त्रिक अभ्यास थिएन । त्यो अलोकतान्त्रिक अभ्यास थियो । र, त्यो अलोकतान्त्रिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिने, दोहोर्याउने काम अहिलेको सरकारले गर्दैन किनभने यस्ता अभ्यासहरुबाट हामी गुज्रिएका छौं । हामीले त्यस्ता अभ्यासहरु हेरेका छौं ।
अहिले सुन तस्करीको कुरा पनि पटक–पटक उठाएको सुनियो । के भयो सुन तस्करी भनेर ? बन्द भयो सुन तस्करी के हुनु, बन्द भयो । पहिले–पहिले चलिराखेको थियो, प्वाल बन्द गरियो । तस्करी गर्नेहरु अहिले जेलमा छन् । तुहाइयो भनेपछि झ्यालखानामा पुर्याइएपछि अदालतमा मुद्दा भएपछि अनि के हुन्छ त ? अरु के गर्न पर्दथ्यो ? सुन तस्करी पहिले ३८ क्विन्टल भएको रहेछ अपराधीहरुको वयान अनुसार ३८ क्विन्टल भएको रहेछ । कहाँ गयो त्यो पहिलेको सरकारले जान्लान कहाँ गयो रु गइसकेपछि थाहा पाइयो । त्यसकारण त्यसलाई रोकियो ।
एउटा कुरा म स्पस्ट गर्न चाहन्छु, विश्वविद्यालय र विद्यालयहरुका जमिनमा सरकारले आँखा लगायोकी यो के भनेको हो भन्ने पनि अलिकति मैले सुनेको छु । सदुपयोग हुनुपर्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जमिन सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पैसा दिइराख्छ जमिन, खेत, चौर त्यो चाहिदैन भने त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्यो नि । त्यसलाई ठिक ढंगले प्रयोग गर्नुपर्यो । कसरी प्रयोग गर्ने त्यसको हुनु पर्यो नि । किमती जमिन लडिराखेको छ तर त्यसको सदुपयोग भएको छैन् । अनि हामी पैसा दिइराखेका छौं । हामी एउटा विद्यालयलाई एउटा जमाना थियो, ५७० रोपनी काठमाडौंको जमिन एउटा विद्यालयलाई दिन्थ्यौं । अनि सबै सार्वजनिक विद्यालयलाई हामी ५७० रोपनी जमिन दिन सक्छौं ?
त्यसको सदुपयोग हुनु पर्छकि पर्दैन रु अनि ५७० रोपनी जमिन दिएको छ, ५।६ करोड दिएको छ एउटा विद्यालयलाई । सबैलाई त्यसै गरी दिन सकिन्छ की सकिदै् रु अहिले ट्यालेन्ट हण्ट गर्न, चार क्लास पढेका विद्यार्थी हण्ट गर्न अहिले हिड्नु पर्ने अवस्था छ रु अहिले त्यस्तो स्थिति छैन् । त्यो जमानाको स्थिति थियो, सन्र्दभ थियो, कारण थियो केही थियो । विभिन्न संघसंस्थाहरुका नाममा अब अहिले साल्ट ट्रेडिङका नाममा थुप्रो ठाउँमा थुप्रो जमिन अनुपयोगी ढंगले चाहि बसिरहेको छ । त्यसको साल्ट ट्रेडिङलाई ५/५ सय विघा, अर्को ठाउँमा ५/५ विघा साल्ट ट्रेडिङलाई । के गर्छ उसले खेती गर्छ की के गर्छ साल्ट ट्रेडिङ भनेको रु त्यसकारण त्यसको सदुपयोग गर्ने भनेको हो । यहाँ लुकाएर कुरा गरेको होइन । त्यो सदुपयोग गर्ने हो । संघसंस्थाहरुका जमिन खुला जमिन राख्नु पर्ने ठाउँमा खुला जमिन राख्नु पर्छ, पोखरी बनाउने ठाउँमा पोखरी बनाउनुपर्छ । खेल मैदान बनाउने ठाउँमा खेल मैदान बनाउनुपर्छ । बगँैचा बनाउने ठाउँमा बगैँचा बनाउनपर्छ । त्यो गर्नुपर्छ । अब यत्तिकै खेर फाल्ने र पैसा खर्च गर्दै जाने होइन । हामीले सदुपयोगको सिद्धान्त त्यो नीति लिनुपर्छ ।
एउटा सडकमा एयरपोर्ट भनेर, सडकमा एयरपोर्ट भनेर लेखेको छ र नीति कार्यक्रममा रु के भनेको छ भने टाढा टाढा एयरपोर्ट छन् भने त्यस्ता ठाउँमा सडकका कतिपय ठाउँहरुलाई तीन किलोमिटर स्टेट सडक बनाएर छेउमा रुख रोपेन भने घर बनाएन भने आकास्मिक रुपमा अवतरण गर्न सकिन्छ । भारतमा एक पटक प्लेन दुर्घटना हुनै लाग्दाखेरी नजिकै यहाँ हाइवे छ, त्यसमा लगेर अवतरण गराउ भनेर पाइलटलाई भनिएको थियो र पाइलटले त्यहाँ लगेर अवतरण गराएका थिए प्लेन ।
बाटामा कहिले कहिले गराउनु पर्छ । यासेर अराफाद चढेको विमान अफ्रिकाको एउटा मरुभूमिमा बालुवामा अवतरण गराइएको थियो । कहिले कहिले त्यस्ता कुराहरु गर्नुपर्छ । टाढा एयरपोर्ट छ भने बाटो, एयरपोर्ट बनाउने होइन सिधा बनाउने । सिधा बनाइदिएपछि प्लेन ल्याण्ड गर्छ । आकस्मिक अवतरण गर्न कठिनाइ परेका बेला । त्यस्तो भनियो त्यो तीन किलोमिटरचाहि त्यसअनुसार गर्दियो र वाइपासहरु गाडीका लागि बनाइदियो भने तत्काल गाडीहरु अप्ठ्यारो परेर प्लेनले ल्याण्ड गर्न खोजेको देख्ने बित्तिकै तिनीहरु वाइपासमा जान्छन् । अनि यो कुरा एयरपोर्ट बाटामा बनाउने आदी इत्यादी भनेर यो कुनै मजाक उडाउने विषय हो र रु सरकारले यस्तो पनि सोच्दो रहेछ है, सोच्न भ्याउदो रहेछ है भनेर खुसी हुनुपर्ने ठाउँमा ।
महिला लक्षित कार्यक्रम भएन भन्ने पनि साथीहरुको आएको छ । महिला लक्षित कार्यक्रम अहिले जति कहिले थियो र रु अहिले महिला लक्षित कार्यक्रमको हुनत महिला लक्षित कार्यक्रममा दुर्गमबाट महिलालाई रेस्क्यु गर्ने परिपाटी सुरु गरिएको छ । त्यो कामलाई कन्टिन्यु गरिन्छ । त्यसलाई निरन्तरता दिइन्छ भन्दा समर्थन गरेको हो की विरोध गरेको हो बुझिएन । अन्त पनि सुत्केरी हुने महिला छन् भनेर, छन् । तर बाटो भएका ठाउँमा, सुगम ठाउँमा, गाडी जाने ठाउँमा र दुर्गम ठाउँमा परेको स्थिति फरक हो त्यो । त्यस्तो ठाउँबाट रेस्क्यू गर्नुपर्छ । अरु ठाउँमा वास्ता गर्नुपर्दछ होइन । अरु ठाउँमा पनि वास्ता गर्नुपर्दछ । सबै इम्पु्रव गर्नुंपर्छ र सामाजिक अवस्थानै इम्प्रुव गर्नुपर्छ ।
महिला हिंसाको विरुद्ध, महिलामाथि हिंसा हुन दिइने छैन् । हिंसा कतै भएमा कानुनी कारवाही गरिने छ र कडा कारवाही गरिने छ । महिला र महिलाको विकास, सशक्तिकरणका लागि थुप्रै कार्यक्रमहरु ल्याइएको छ । अप्ठ्यारोमा परेका महिलाहरुको उद्दार, पुनःस्थापना यसका निम्ति कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । महिलाको सर्भवाइकल क्यान्सर, व्रेस्ट क्यान्सर आदिका लागि निशुल्क परीक्षणको व्यवस्था आदि गरिएको छ । अनेक सामाजिक विकृतिहरुः दाइजो, छाउपडी, तिलक यस्ता अनेक कुप्रथाहरुका विरुद्ध लड्ने ती कुराहरु गरिएको छ । र, शौचालयको प्रबन्ध महिला, छात्राहरुका लागि नै विशेष ध्यान दिएर शौचालयको प्रबन्ध गर्ने र सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा सेनेटरी प्याड समेत वितरण गर्ने नयाँ अभ्यास यो सुरु गरिएको छ । यस्ता थुपै्र कार्यक्रमहरु ल्याइएको छ ।
महिला केन्द्रीत एन्टरपेनरसीप बढाउनको लागि, उनीहरुको शिक्षा र उनीहरुको सम्पतिमा अधिकार खाली नाममा लेखिदिने मात्रै होइन उनीहरु इन्टरपेनरसीप । संचालन, त्यसको व्यवस्थापन, त्यो क्षमता र सशत्तिकरण,सामाजिकीकरण यी कुराहरुका लागि ल्याइएको छ । युवा रोजगारीका लागि थुप्रै कार्यक्रमहरु ल्याइएको छ । सर्टिफिकेट धितो राखेर लोन दिनेदेखि लिएर, योजना धितो राखेर लोन दिनेदेखि लिएर, योजना कसरी बनाउँने र कसरी धितो राख्ने भन्ने कुराहरु सिकाउने समेतदेखि, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमदेखि लिएर, युवा रोजगारीका कुराहरुदेखि लिएर यस्ता अनेक कार्यक्रमहरु ल्याइएका छन् । त्यसकारण आएको छैन भन्ने कुराहरु होइन ।
हामीलाई थाहा छ, हाम्रो देश डेमोग्राफिक हिसाबले एउटा अनुकुलको स्थितिमा छ । हामी युवाहरुलाई सीप विकास, शिक्षा, व्यवसायीक तालिम आदिका कामबाट देश विकासमा लगाउन सक्छौं । त्यसरी मात्रै देश विकास हुन्छ । त्यसकारण हामीले प्रोत्साहन गर्ने कुराहरु पनि ल्याएका छौं । विकास सन्तुलित नभएको भन्ने पनि साथीहरुको भनाइ छ । त्यसमा नीति कार्यक्रमलाई विकासलाई कसरी सन्तुलित प्रादेशीक हिसाबले, क्षेत्रीय हिसाबले अर्थात भौगोलिक वा जातिय वा अरु विभिन्न कोणबाट कसरी सन्तुलित ढंगले लान सकिन्छ भन्ने । अब प्राथमिकता स्पष्ट नभएको भन्ने पनि गर्नुभएको छ । मैले अघि पनि भने । प्राथमिकता भनेर हामी कृषिमा मात्रै ध्यान दिन सक्दैनौं । सिंचाइमा मात्रै ध्यान दिन सक्दैनौं । हामीले पूर्वाधारको विकास गर्नुछ ।
हामीले बाटाहरु बनाउनु छ । हामीले अरु कामहरु गर्नुछ । हामीले विद्युतिकरण, विद्युत उत्पादन,विद्युतिकरण पनि गर्नु छ । त्यसकारण पर्यटनको पनि विकास गर्नुछ । प्रांथामिकता भनेर हामी एउटा मात्र क्षेत्रका प्राथमिकता भन्न सक्दैनौं । केही क्षेत्रहरु प्राथमिकताका क्षेत्र हुन्छन् । केही मुख्य–मुख्य आयोजना जो विकासका आधारका रुपमा बनेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, मुख्य ठूला चाहे उद्योगका हुन्, चाहे पूर्वाधारका हुन् । चाहे बाटाका हुन्, चाहे विद्युतका हुन्, चाहे सञ्चारका हुन् र हामीले डिजिटल नेपाल भनेका छौं, हामीले साक्षर नेपाल भनेका छौं । यी नाराहरुका साथ र यी नारा मात्रै होइन । कतिपयले भन्नुभयो नारा मात्र । नारा मात्र होइन परिणाममा हेर्नुस् । गतवर्षको अभियानले कति विद्यार्थीलाई विद्यालय ल्यायो । नारा मात्रै हो र रु यस वर्षको अभियानले कति फरक पार्दै छ रु नारा मात्रै हुन्छ रु त्यसकारण यो नारा मात्रै भन्ने भ्रम नरहोस् ।
हामीले प्राथमिकताका क्षेत्रहरु तोकेर, रुपान्तरणकारी योजनाहरुलाई, समाज परिवर्तनका योजनाहरुलाई र विकासका योजनाहरुलाई । तीनओटै क्वाटगोरीका योजनाहरुलाई स्तरका साथ, त्यही उचाँइका साथ अगाडि सारेका छौं । एउटाचाहि यो मानसिकता कस्तो हो मलाई अचम्म लाग्छ । भात खाने कुरा गरौं न भात खाने । कहाँ बाटा बनाउने कुरा गर्ने रु भात खाने कुरा गरौं न कहाँ रेल बनाउँने कुरा गर्ने ? भात खाने कुरा गरौं न भात खाने कहाँ पानी जहाँजका कुरा गर्ने भन्ने ? अचम्म लाग्छ सुन्दा पनि । हामी नेपालीहरु आज पनि भात मात्रै खाने लक्ष्य राख्ने ? भोली पनि भात मात्रै खाने लक्ष्य राख्ने रु भात खाने लक्ष्य भन्दा अलिकति माथि जानु पर्यो नि । भात खाने सम्बन्धमा मैले भनेको छु, अब नेपालमा निरपेक्ष गरिबी एकदुई वर्ष भन्दा उत्ता जादैन । किनभने हामीले मौलिक हकसम्बन्धीमा त्यो प्रबन्ध गरेका छौं र यस्तो कानुनहरु निर्माण गरेका छौ । मैले डिक्लिएर गरेको छु, सरकार छ यस देशमा । कोही भोकै पर्दैन कोही भोकले मर्दैन ।
जनतालाई आवास दिने । आवास विहीन कोही हुदैन हामीले भनेका छौं । आवासको प्रबन्ध हामी गछौं । छोराछारी पढाउनको लागि आधारभूत तहको शिक्षा निशुल्क, किताब कलमसहित, खाजाको व्यवस्थासहित आवश्यक पर्नेलाई त्यो गरेका छौं । स्वास्थ्यको वीमा, प्रबन्ध, बुढेयौती बच्चादेखि बुढेसकालसम्मका लागि गरेका छौं । अनेक सामाजिक जीवनमा रुपान्तरण ल्याउने काम गरेका छौँ र तल्लो वर्गलाई लाभ हुने थुप्रो काम ल्याएका छौँ । अब निरपक्ष गरिबी रेखामुनी भन्ने कति जनसंख्या कहिलेसम्म रहन सक्छ रु यो सक्दैन । अब खान लाउन नपाउने, बस्न नपाउने नेपालमा कोही पनि हुँदैन । सडकमा मैले भनेको छु, सडकमा कोही देखिन्छ भने नजिकको प्रहरीमा खबर पाउँ, पहिले जस्तो सडकमा जिंरिङ्ग कपाल भएको, मैलो भको, खाउ शरीर भरी भएको, सडकका पेटीमा पछारिएको त्यो देख्न पाउनु हुन्न नेपालमा त्यसको प्रवन्ध सरकारले गर्छ ।
त्यसको अन्त्य भयो मैले भनेको छु । यो युगान्तकारी परिवर्तन होइन रु त्यस कारण अब साना कुरामा ध्यान दिने, ठूलामा नदिने, ठूलामा दिने, सानामा नदिने असन्तुलन होइन । हामी ठूला योजना सँग सँगै चलाउछौँ, साना कुरामा पनि ध्यान दिन्छाँै । सडकमा बेसाहाराको पनि उद्धार गर्छौँ, उसको पनि प्रबन्ध गर्छौँ, अशक्त अपाङ्ग कोही छ त्यसको पनि प्रबन्ध गर्छौँ र ठूला आयोजनाहरुतर्फ पनि जान्छौँ जो विकासका निम्ति, भोलीका निम्ति विकासका आधारहरु हुने गर्छन् ।
त्यसकारण यो सबै कुराहरुको सन्तुलित विकास, सन्तुलित ढंगले सरकार अगाडि बढ्छ । यस सम्बन्धमा हामीले पूर्व पश्चिम विद्युतिय रेलमार्ग भनेका छौँ । अनि भात खान पाको छैन यहाँ पूर्व पश्चिम रेल मार्ग भनेर । भातको पनि प्रवन्ध गछौँ, पूर्वपश्चिम रेलमार्गको पनि पुरा गर्छौँ । अब जलमार्गको पनि कुरा गछौँ । एउटा स्टिमर आफैले आविष्कार गरेको जस्तो भनेर, हामी कसैले होइन । स्टिम इन्जिन कै विकास जेम्स वार्टले गरेका थिए । त्यो हामीलाई थाहा छ । किन अगाडि चलेन स्टिमर रु किन स्टिमर बनाएर कोशीमा हालेन रु कैले, स्टिमर अहिले किन बनाएर कोशीमा हाल्यो रु एउटा मानसिक परिवर्तन, विकास तर्फको, विकासको अवधारणा, नागरिक नागरिकमा विकासको अवधारणा आएर आफै स्टिमर बनाएर त्यो सरकारी होइन अहिले कोशीमा जुन चलिरहेको छ ।
आफैले बनायो भनेर भन्ने कुरा, आविश्कार आविश्कार मात्रै होइन कि बनाको, चलाको पनि अहिलेको सरकारले होइन आफै हो । तर नागरिकमा त्यो स्टिमर बनाउने र कोशीमा चलाउने सोच कसरी आयो ? यातायात सस्तो छ । ५ घण्टा हिडेर भिरबाट खसिन्छ कि ? के गरिन्छ कि ? भन्ने अवस्थाको ५ घण्टा हिडेर ७ सय तिर्नु पर्ने ठाउँमा अहिले ४ सय रुपैयामा २० मिनेटमा पुर्याउछ । यो परिवर्तन कसरी आयो रु यो एउटा मानसिकतामा परिवर्तन हो । एयरपोर्टहरु दुर्त गतिमा वन्दैछन्, पूर्वपश्चिम विद्युतिय रेल मार्ग यो सपना होइन । जसलाई सपना हामी भनिराखेका छौँ । अब हामी यसको त कति ठाउँमा एलाइनमेन्ट बनेर खनिराख्या छाँै बाटो यो अगाडि बढ्छ । मदन भण्डारी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्गको विस्तार, माथिल्लो तामाकोशी आयोजना, सुनकोशी मरिन ड्राईभर्सन यो आगामि आर्थिक वर्षमै सुरु गर्ने गरी योजना गरिएको छ ।
कहाँबाट आउछ यत्रो विग्न पैसा रु भन्ने, एकत यस वर्ष हामीले ३६४ अरब वृद्धि गरेका छौँ यस वर्ष, आन्तरिक वृद्धि ३६४ अरबको वृद्धि यस वर्षको छ । अर्को हाम्रो पब्लिक सेक्टरको लगानी ४० प्रतिशत र प्राईभेट सेक्टरको ६० प्रतिशत छ । यो खाली पब्लिक सेक्टरको, हाम्रो बजेटको, हाम्रो बजेटको अंकको, हाम्रो आम्दानीको करको अंक हेरेर मात्रै होइन । विदेशी लगानी समेत मोविलाईजेशन गर्ने र प्राईभेट सेक्टर पनि मोविलाईज गर्ने । यी सबै कुराहरुसहितहामीले यि आयोजनाहरुको योजनाहरु अगाडि बढाएका हौँ । कतिपय साथीहरुले तथ्य तथ्याङ्कक, आकडा सडक त्यति बनेको हो र रु आदि इत्यादि कुरा गर्नु भको छ । त्यसमा हामी अहिले मैले भनेको तथ्याङ्कहरु पनि मैले गएर नापेको होइन । त्यो विश्व वैंकले गर्छ, त्यो एडिविले गर्छ त्यस्ता अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरु छन् जसले त्यो आँकाडा निकालेको छ र हाम्रा राष्ट्रिय स्रोतहरुले जे आँकडा बनाएका छन् । गत वर्षको रेकर्ड, अहिलेको रेकर्ड, अर्को रेकर्ड यो सबै पनि त्यसका आफ्ना विधि छन् । त्यस कारण म त्यसम धेरै बहस गर्न चाहान्न । तर सामाजिक रुपान्तरण, सामाजिक परिवर्तन, समाजिक विकास देखेको हुनुपर्ने ।
मास्क खोलेर हिड्ने कुरा साथीहरुले गर्नु भो, पोहोर साल मास्क लगाएर हिड्नु हुन्थियो यस पल्ट आफै नगलाई हिड्नु भको छ । अब अरुकेही प्रमाण नै चाहिँदैन । हामी काठमाडौंलाई सफा शहरको रुपमा विकास गर्न चाहन्छौँ । हाम्रो प्रयास त्यसमा केन्द्रीत छ । अहिले हामीले बिल्कुल सफा गरिसक्यौँ, शहर एकदम धुलो रहित भैसक्यो भन्ने होइन । अहिले केही निर्माण कार्यका छन्, केही पुराना अब्लिकेशनहरु छन् । तर हामीले अब सफा कसरी कसरी गर्छौँ भन्ने पनि भनेका छौँ । बाहिरबाट आउने, धुलो सहित आउने इत्यादी गाडिहरुलाई अटोमेटिक सफाई केन्द्रहरु त्यहाँ बनाएर त्यसबाट सफा गरेर मात्र भित्र ल्याउने जस्ता प्रवन्धहरु समेतका विधिहरु अपनाएर हामीले सफा गर्छौँ भनेका छौँ । त्यसकारण यि काल्पनिक कुराहरु होइनन् ।
राष्ट्रिय आय वृद्धि भको मैले अघि पनि भने ४६४ अरब यस पल्ट राष्ट्रिय आयमा, आन्तरिक आयमा वृद्धि भएको छ । बचतको स्थिती कहिले पनि २७ प्रतिशतको कल्पना गर्न सकिदैन थियो । १५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थिएन । यसपल्ट बचत २७ प्रतिशत पुगेको छ । जो नीति कार्यक्रमले बताएको छ । आन्तरिक ऋण उठाएर सरकार चलाउन परेन । आन्तरिक ऋण उठाएर चलाउने गरिएको थियो । अहिले आन्तरिक ऋण उठाइएको छैन । अर्थतन्त्र सवल हुने दिशातर्फ गएका यी लक्षणहरु हुन् । यसमा हामीले बाह्य सहयोग लिएको वा ऋण यति भयो भन्ने, ऋण त लिने नै हो, ऋण लिएर विकास गर्ने हो । सब भन्दा बढी ऋण अमेरिकाको छ । अमेरिकाको जति ऋणले थिचिएको देश कुनै पनि छैन होला रु र अमेरिका जति धनि देश पनि अरु कुनै छैन । त्यसकारण ऋण लिएर गरिब हुन्छ भन्ने होइन । फोव्र्समा नाम निस्किएकाहरुको लोन अवश्य धेरै हुन्छ । मलाई लोन छैन किन भने सम्पत्ति भए पो लोन हुन्छ, कसैले दिदै दिदैन लोन । जसको सम्पत्ति छ उसैले कारोवार गर्छ, उसैले लोन लिन्छ, उसैको ऋण हुन्छ । हामी काम गर्न चाहन्छौँ भने ऋण पनि लिन पर्ने हुन्छ । ऋण लिएर पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
खर्च र राजश्वको लक्ष्य हासिल नभएको भन्ने साथीहरुको टिप्पणी त्यो उपयुक्त छैन । हाम्रो नीति कार्यक्रमले एउटा कुरा स्विकारेको छ कि हामीले काममा तिव्रता दिन सकेको छैनौँ । समयमा आयोजनाहरु पुरा गर्न सकेको छैन । के मेलम्चीको अघि मेलम्चीलाई विदा गरियो कि के भन्नु भो, विदा गरेको होइन भागेको हो । उसको आर्थिक अवस्था डामाडोल भो कम्पनीको त्यस कारण भाग्यो । तर मेलम्ती आगामि आर्थिक वर्षभित्र पुरा गर्ने हामीले योजना बनाउँदैछौँ र त्यो त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्ष भित्र मेलम्ची आउँछ काठमाडौंमा,अरु पूँजिगत खर्च, विकास खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न जरुरी छ । अहिले पनि त्यो वृद्धि त्यो आवश्यक स्तरमा पुगेको छैन । त्यो अपेक्षित स्तरमा पुगेको छैन । शतप्रतिशत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्नु पर्ने । त्यसो भयो भने विकासका कामहरु छिटो अगाडि बढ्थिए । हाम्रो विकासको क्षमता पनि न्यून छ । खर्च गर्ने क्षमता अर्थात काम गर्ने क्षमता, प्रविधिको हिसाबले अरु विकासका समयन्त्रहरु, योजनाहरु, यन्त्रहरु, मसिनहरु विभिन्न कारणहरु छन् यसभित्र, हाम्रा प्रोक्यूपमेन्ट ल आदिका कारणले त्यो खर्च गर्ने क्षमताहरु कम छन् । त्यसकारण यी कुराहरु नीति कार्यक्रमले कुनै फरक पारेको छैन । त्यो सहि कुरालाई सहि ढंगले भनेको छ । हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता, तिव्र काम गर्नु पर्ने बढाउनुपर्ने यी कुराहरु छन् भनेर भनिएको छ ।
म अब एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु, गतवर्ष हामीले नीति कार्यक्रम सर्वसहमतिले पारित गर्यौं । त्यसले हाम्रो संसदको गरिमा, हाम्रो संसदीय एकता अत्यन्त सुन्दर देखियो र त्यसको इम्लिमेन्टेशनमा पनि राम्रो असर भयो । त्यसर्थ म सम्पूणै माननीय जीहरुलाई, प्रतिपक्षहरुलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, संविधान बमोजिमको निर्वाचन पछिको संसदमा हामीले नीति कार्यक्रम सर्वसहमतीले पास गर्ने एउटा परमपरा प्रारम्भै गरिसक्यौँ गतवर्ष निर्वाचन पछाडि जुन सरकार वन्यो त्यसले पेश गरेको नीति कार्यक्रम सर्वसम्मतीले पारित गर्यौं ।